Weriye si toos ah tebinayey ciyaar K/Cagta ah oo sabab cajiib leh shaqada uga tegay | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Weriye si toos ah tebinayey ciyaar K/Cagta ah oo sabab cajiib leh...
Weriye si toos ah tebinayey ciyaar K/Cagta ah oo sabab cajiib leh shaqada uga tegay
Weriye u dhashay Ruushka oo u shaqeynayay Telefishin ciyaaraha tabiya ayaa ka carooday go’aamada garsoorahii ciyaarta, taasoo sababtay inuu shaqada ka tago iyadoo qeybta labaad ee ciyaarta ay weli socoto.
Dadka ayaa iska daawanayay ciyaarta oo aan lahayn cod weriye oo sharaxaya waxa socda, waxayna ku dhammaatay barbardhac 1-1 ah, waxayna ahayd horyaalka koobaad ee Ruushka.
Carada weriyaha ayaa timid ka mid markiii Mid ka mid ah ciyaarto difaac ah uu kufiyay weeraryahan kooxda Torpedo ka tirsan, Garsooraha ayaa go’aansaday in qaladka uu ka dhigo laad xor ah, halkii uu ka dhigi lahaa rigoore ama gool ku laad.
Balse Weriye Vladimir Nikolsky iyo dad kale oo badan oo ciyaarta daawanayay ayaa ka carooday go’aanka garsooraha.
Mid ka mid ah difaaca ayaa gacanta ku celiyay kubaddii Laadka xorta ah aheyd ee lagu tuuray goolkooda, waxayna ahayd rigoore kale, balse garsooraha ayaa diiday, wuxuuna sii waday ciyaarta.
Arrintaa waxay sababtay in weriyaha uu aad u xanaaqo, buuqna sameeyo, wuxuuna laba daqiiqo ayuu ku celcelinayay “arintan waxay ceeb ku tahay ciyaaraha Ruushka”. ka dib wuu iska tagay asigoo leh “daawo ciyaarta iyadoon laguu faalleyneyn”.
Ciyaarta ka dib wuxuu la hadlay telefishinka RT wuxuuna u sheegay inuusan ka shalayneyn wixii uu sameeyay. “Shucuurtayda aad ayey u kacday markii aan arkay in kooxda la dhaawacayo.” ayuu yiri weriyaha.
Previous articledeg deg ah: Madaxweyne Farmaajo oo goor dhow war ka soo saaray Shirkii Kismaayo
Next articleDeg Deg “Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Bakool & ciidamo taabacsan Mukhtaar Roobow oo ka qeyb gaatay